Vazo miteny : Hisantatra ny taona amin’ny fitetezana an’i Eorôpa sy Amerika i Samoëla -
AccueilVaovao SamihafaVazo miteny : Hisantatra ny taona amin’ny fitetezana an’i Eorôpa sy Amerika i Samoëla
Vazo miteny : Hisantatra ny taona amin’ny fitetezana an’i Eorôpa sy Amerika i Samoëla
11/01/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Mpanakanto fantatra amin’ny vazo miteny. Taorian’ireo seho takariva samihafa teto an-tanindrazana sy ny famaranana ny taona tany Toamasina, dia hisantatra ny taona 2018 amin’ny fitetezana an’i Eorôpa sy Amerika avaratra i Samoëla. Haharitra telo volana ny fivahinianana any ampitan-dranomasina izany, ary hanomboka ny volana febroary hatramin’ny volana Avrily. Aorian’ny fampisehoana ao Frantsa, Italia, Belzika… dia hihazo an’i Kanada sy Etazonia izy. Toerana 16 no ho teteziny mandritra io telo volana io.
Ny taona 2014 no nanao fitetezana firenena maromaro toa izao ity mpanakanto mpihira ny ny « zana-bahoaka » ity. Toa ny mahazatra azy, dia ho feheziny amin’ireo fampisehoana ataony ireo rakikira samihafa efa navoakany niainga tany amin’ny « Mampirevy » izay nivoaka tamin’ny taona 1997, ka hatramin’ny « ao anatiny ». Hafana araka izany ny fifankahitana eo amin’ity mpanakanto ity sy ireo mpankafy azy taorian’izay efa-taona tsy nifankahitana izay.
Nilatsaka ihany ny saron-tava amin’ity resaka IEM-Rajoelina ity omaly. Niseho masoandro tokoa mantsy ireo miaramila “putschiste” tamin’ireny fanonganam-panjakana ny taona 2009 ireny sady nitàna andraikitra nandritra ny Tetezamita. Komandin’ny COFIA (Commandement de la Force d’Intervention ...Tohiny